जापानले युद्धपोत सहित अत्याधुनिक जहाजका साथ खाडीदेशमा किन पठाउदै छ ? – सुदूरखबर डटकम
जापानले युद्धपोत सहित अत्याधुनिक जहाजका साथ खाडीदेशमा किन पठाउदै छ ?
label समाचार प्रकाशक query_builder December, 28 2019
एजेन्सी, पौष-१२ । जापानले मध्यपूर्वमा युद्धपोत र गस्ती गर्ने हवाइ जहाज पठाउने भएको छ । सरकारले तेल बोक्ने जापानी पानी जहाजको रक्षा गर्न भन्दै मध्यपूर्वमा युद्धपोत र गस्ती गर्ने हवाइ जहाज तैनाथ गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले शुक्रबार पारित गरेको एक दस्तावेजमा युद्धपोत र हवाइ जहाज पठाउने उल्लेख छ । नयाँ योजना अनुसार हेलिकप्टरसहितको एउटा युद्धपोत र २ वटा पि-३सि गस्ती जहाज पठाइने जापानी समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
जापानले झण्डै ९० प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्व हुँदै आयात गर्छ । सरकारले आफ्ना कार्गो पानी जहाजमाथि खतरा उत्पन्न भएपछि उक्त क्षेत्रमा युद्धपोत र जहान परिचालन गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको हो ।
नयाँ योजनामा जापानी पानी जहाजमाथि कुनै आपत वा खतरा आइपरे रक्षामन्त्रीले हतियार प्रयोग गर्ने गरी जापानी फौजलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी योजनामा ‌‌ओमनको खाडी, उत्तरी अरेबिया सागर र एडनको खाडी वरपर युद्धपोत र जहाज तैनाथ गरिने छ । ा
खाडी क्षेत्रमा गत वर्षदेखि अमेरिका र इरानबीच तनाव चर्कँदै गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग भएको आणविक सम्झौताबाट पछि हट्दै इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएपछि दुबै मुलुकबीच तनाव चुलिएको हो ।
गत मे र जुनमा पर्सियाको खाडी नजिकै तेल ओसारपसार गर्ने केही पानी जहाजमाथि आक्रमण भएको थियो । जसमध्ये एउटा जापानी पानी जहाज समेत थियो । तेल बोकेका पानी जहाजमाथि इरानले हमला गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको थियो । तर इरानले भने अमेरिकी आरोपको खण्डन गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जापान र अमेरिकाले एकअर्कालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यी दुबै एकअर्काका सहयोगी मुलुक हुन् । तर मध्यपूर्वमा पानी जहाजको सुरक्षाका लागि अमेरिकाले गठन गरेको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन जापान इच्छुक देखिँदैन ।
साथै इरानसँग समेत जापानको ऐतिहासिक र सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यही भएर जापानले मध्यपूर्वमा आफ्नै युद्धपोत र गस्ती हवाइजहाज पठाउने तयारी गरेको हो ।
गत हप्ता मात्रै इरानका राष्ट्रपति हसन रोहानीले जापानको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणमा रहेका रोहानीलाई प्रधानमन्त्री शिन्जो आवेले खाडीमा जापानले जल सेना पठाउन लागेको बताएका थिए ।